Mogadishu Journal » Imaaraadka oo looga digay Faro gelinta uu ku hayo Siyaasada Soomaaliya
Mjournal :-Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa fadhi ay yeesheen waxa ay uga doodeen arimo ay ku jirto xaalada Siyaasadeed ee Soomaaliya, waxa ayna uga digeen dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga faro-galinta ay ku hayaan dowlada Soomaaliya.
Kulanka ay yeesheen Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa lagu meel mariyay qaraar ku saabsan xaaladda Soomaaliya, waxa ayna si weyn uga falan qoodeen Baarlamaanka saameynta ee Soomaaliya ku yeelatay Xiisada Khaliijka.
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa sheegay go’aankii dhax dhaxaadnimo ee Soomaaliya ka qaadatay Xiisada Khaliijka in uu sababay in dalalka Imaaraadka iyo Sacuudigu ay joojiyaan lacagtii ay siin jireen Soomaaliya, iyagoo ku ciqaabaya go’aanka dhax dhaxaadnimo.
Dhinaca kale Baarlamaanka Yurub ayaa dowladda Imaaraadka ku booriyay inay joojiso falal xasilooni-darro ka abuuri kara Soomaaliya, sidoo kalena ay ixitiraanto madaxbannaanida dhuleed iyo qaranniamada Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya ayaa go’aan dhax dhaxaadnimo ka qaadatay xiisadii wadamada Khaliijka, waxa ayna arintan keentay in uu xumaado xiriirkii Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta , waxa ayna Imaaradaka bilaabeen falal lidi ku ah dowlada Soomaaliya.
Xulka Faransiiska oo ka badiyay Uruguay